Dad ay daadad ku dileen gobolka Owdal – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dad ay daadad ku dileen gobolka Owdal
MAREEG 7 April 2016
Wararka ka imaanaya degmada Dille, oo 30 km u jira magaalada Boorama ee gobolka Owdal, ayaa sheegaya in ugu yeraan 6 ruux oo carruur iyo dad da’ ah ay ku geeriyoodeen markii sida la sheegay roobab lixaad leh ay ka da’een halkaasi.
Dadka degmada Dille, jooga ayaa Radio Muqdisho u xaqiijiyay in daadad aad u xoogan oo ka dhashay roobabkaasi ay sababeen in ay guriyo badan oo isugu jira kuwo ganacsi iyo kuwo deegaan gebi ahaamba daadadka ay la tageen.
Roobka ayaa la sheegay in uu ku bilowday degmadaasi abaare 5 tii galabnimo ilaa 7 fiidnimo isla markaana khasaare aad u darad oo nool iyo moodba leh uu geystay.
Guddoomiyaha gobolka Owdal, Maxamuud Cali Saleebaan, ayaa sheegay in roobabka ka da’ay degmada Dille ay ka dhalatay in baliyada iyo dooxooyinka halkaasi ka ag dhowaa ay soo jabsadaan.
Gobolka Owdal, ayaa waxaa uu kamid yahay deegaanada ay saameysay abaarta ka jirta gobolada waqooyi ee Soomaaliya.
Waxayna bishii hore ku dhawaaqeen xaalad deg deg ah taas oo abaarta ka jirta gobolka awgeed.